Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay aqbashay una hogaansameyso go'aankii maxakamada Cadaaladda aduunka ee ICJ ee dib loogu dhigay waqtiga dhageysiga dacwadda badda ee kala dhexeeya Kenya.
Raiisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Mahdii Maxamed guuleed ayaa BBC-da u sheegay in inkastoo Soomaaliya ay jacleed in 5 ilaa 12-ka June la qaado dacwada haddana ay garaawsadeen waqtiga lagu jiro oo "aaney suurta gal aheyn marka dhinacyo kala duwan laga eego".
"Inkasteenu jecleyn kuna doodnay oo ku adkeysannay i Bisha June la maqlo oo maqaal iyo muuqaal lagu dhageysto, haddana anaga doodayadu waxay aheyd in mar walba la maqlo caddaallada oo la dhageysto, balse go'aanka maxkamadda dhinacyadu wey ku qasban yihiin inay qaataan waxay maxkamaddu waqtigan tixgelisay cudurka dilaaga ah ee aafeeyay adduunka," ayuu yiri Mahdii.
Bishii November, waxaa magaalada Nairobi ku kulmayUhuru Kenyatta iyo Farmaajo kuwaas oo isku raacay in khilaafka badda uusan saameyn xiriirka labada dal ka dhexeeya.Waxayna ku heshiiyiin in dib loo soo celiyo arrimo ka dheexayay labada dhinac oo xirmay.
"Soomaalida dabcan wey jeclaan laheyd in waqti hore waxaan lagu kala baxo, hadda ma arko aniga wax weyn oo dhib ah haddiiba weli maxkamdda uu kiiska yaallo," ayuu yiri.
"Maadama arrinka uu weli taagan yahay hadda dhacdadan waxa hadda Kenya u gaar ah ma aha, wax Soomaaliya u gaar ahna ma aha, waa wax adduunka oo dhan ku wajahan waana wax maxkamadda sida ay u shaqeyn doonto saameyn ku yeelan doona".
Waxay sheegeen inay eegayaan xaaladda qeyrul-caadiga ah ee uu sababay xanuunka coronavirus ay go'aansadeen in waqtiga furitaanka dhageysiga kiiska laga dhigo sannadka soo socda ee 2021-ka.